Saika hanao valandresaka: tsy nipoitra indray i Corinne, ilay sakaizan-dRakotoarivelo Mamy | NewsMada
Saika hanao valandresaka: tsy nipoitra indray i Corinne, ilay sakaizan-dRakotoarivelo Mamy
Mampiahiahy ny mpanara-baovao rehetra satria tsy nipoitra tampoka tamin’ny ora farany indray i Corinne Asmiël, sakaizan-dRakotoarivelo Mamy raha nikasa hanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly teny amin’ny Falda Antanimena…
Matahotra sa mbola misy zavatra nalamina ? Nandefa mailaka ho an’ny mpanao gazety rehetra i Corinne Asmiël mitondra ny anarana hoe Andrianivoson Tiavina Corinne ilay tovovavy sakaizan-dRakotoarivelo Mamy fa hanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety eny amin’ny Falda Antanimena, omaly tamin’ny 2 ora tolakandro momba ny raharaha Rakotoarivelo Mamy izay nahavoatonontonona ny anarany.
Niandry vasoka teny amin’ny Falda Antanimena ireo mpanao gazety marobe, saingy tsy tonga mihitsy ity sakaizan-dRakotoarivelo Mamy. Tsy tonga tamin’ny ora farany araka ny efa nifanarahana anefa izy fa lehilahy iray no tonga avy any nilaza fa solontena nalefan’ny renin’i Corinne nilaza fa nisy sampona nahazo an’i Corinne dia tsy afaka hiresaka amin’ny mpanao gazety, araka ny fotoana efa nifanarahana indray izy. Milaza ho tsy mahalala na inona na inona mihitsy ilay lehilahy nifampiresaka tamin’ny mpanao gazety fa hoe iraka hilaza ny tsy fahafahan’i Corinne hanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety.
Mampiahiahy ihany ilay hoe fahasamponana tampoka nahazo ity sakaizan-dRakotoarivelo Mamy ity. Isan’ireo nolazain-dRakotoarivelo Mamy fa namitaka azy noho ny resaka vola ity tovovavy ity araka ny nolazainy tao amin’ny kaontin’ny facebook-ny mialoha ny nahafatesany. Miely anefa ny feo any anaty tambajotran-tserasera fa rain’i Corinne ilay lehila²hy tonga naneho fialan-tsiny tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny Falda Antanimena omaly. Milaza ho iraka fotsiny anefa izy raha nanontanian’ny mpanao gazety fa tsy misy rohim-pihavanana amin’i Corinne. Inona ny tena marina amin’ity raharaha ity ?
Tsy hita ny vodim-bala…
Mbola mitohy hatramin’izao ny fanadihadiana momba ny antony nahafaty an-dRakotoarivelo Mamy. Araka ny fanadihadian’ny polisy misahana ny heloka bevava, tsy hita tao an-tranony ny vodim-bala nandritra ny fizahana nataon’izy ireo tao an-trano. Tifitra teo amin’ny lohany anefa no nahafaty azy.
Etsy andaniny tsy mazava izao fihemorana tampoka tamin’ny ora farany nataon’i Corinne izao. Matahotra ho voasaringotra manoloana ireny fanambarana an-taratasy nataon-dRakotoarivelo Mamy ka naparitany tany anaty tambajotran-tserasera facebook ireny?
Misy ankinafinafina sy efa voaomana mialoha matoa tsy sahy nanao valandresaka tamin’ny mpanao gazety indray?